Soo dejisan Remote Mouse 3.012 – Windows – Vessoft
WindowsShabakadGelitaanka fogRemote Mouse
Mouse Remote – software ah in ay hago of computer by qalab mobile. software The badasha Android, macruufka iyo Windows Phone qalabka galay keyboard Wi ama mouse in la xakameeyo your computer. Remote Mouse synchronizes smartphone ama kiniin la computer ah oo macneheedu yahay xidhiidhka ka wireless isticmaalaya-IP address ama QR-Code. Remote Mouse buuxda simulates hawlaha xeesha durugsan kuu ogolaanaya inaad si ay u isticmaalaan keyboard ee isu-gaynta iyo gacan ku haynta dulqabo mouse muhiimka ah by touchpad of smartphone ah.
Daah Remote codsiyada
Remote xidho, qeybtii labaad ama hurdo mode
Software in ay ku xidhmaan server fog ama computer iyada oo loo marayo hab maamuuska kala duwan. Sidoo kale ee software-ka waxaa jira korontada si ay furayaasha SSH iyo sugida.